AQRISO: Sheeko gaaban oo dhex martay Ozil iyo Boateng kaddib markii la isku aadiyay Arsenal iyo Bayern Munich Champions League – Gool FM
Bayern Munich ayaan u xooganayn sida sanadiii hore maadaama ay si lama filaan ah hogaanka horyaalka ula heyso kooxda yar ee RB Leipzig halka sidoo kale ay kaalinta labaad ku soo baxday Champions League.
Haddaba labada xiddig ee reer Germany ayaa sheekadan gaaban dher martay kaddib markii la isku beegay labadooda kooxood:
Ozil: Markale ayaa la isku keen aadiyay.
Boateng: Waa isla wadadii sanad kasta.
Ozil: Iminka innagay inoo taalaa bro.
Boateng: Miyaadan kol horeba oran markii ugu dambesay?
Ozil: Sanad cusub, nasiib cusub. Kolkaan 10-dhibic kuma heysaan Bundesliga ciyaartoyna nooma dhigan kartaan.
Gool FM .
Shaafici islow oo qudbad u jeedin doona Madaxda warfaafinta kubada cagta Afrika